Posted by ကလိုစေးထူး at 9:16 PM
Wow!alot huh! I think may have around $500 to $600. ha ha....
maybe 800 dollar..
နည်းနည်းနော်နော် မဟုတ်ပါလားဗျို့ ။ လဲလိုက်ရင် ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာ မှန်းတာ မှန်တဲ့လူကို အဲပိုက်ဆံတွေပေးမှာလား? ၁၀၀၀ ဗျာ
Nov 3, 2008, 10:23:00 PM
၂၀၀ ဗျာ .. အလွန်ဆုံး...
ကျနော်ကတော့ အကြွေတွေကို ခွဲပြီး သားတွေရဲ့ saving account ထဲ ထည့်ပစ်တယ်....
အကြွေစေ့ ဒေါ်လာ မမြင်မှမမြင်ဖူးတာ မှန်းတက်ဘူးဗျ =) မုန့် ဝယ်ကျွေးရင်တော့ကျေးဇူးတင်မယ် ။
Nov 3, 2008, 10:27:00 PM
ကျနော်ထင်တာကတော့ ၇၀၀ နဲ့ ၈၀၀ ကြားလောက်ရမယ်ထင်တယ်နော့်
Ko sayhtoo yay, i think it's about 500.
I feel like I want to count it... hee hee... It will be very interesting to count suchalot of coin..... Lol
Nov 4, 2008, 12:47:00 AM
၆၀၀ နနင့် ၇၀၀ ကြားရှိပါမည်။
စကားမစပ်။ ။အကြွေစေ့က ဘယ်မှာ လဲရတာလဲဟင်....
ငါးပြားစေ့ဘူးကြီး ၁ ဘူး နဲ့ ကျန်အကြွေစေ့များ ( ငါးမူးအောက်) ၁ ဘူးရှိနေပါသည်။ ဟီဟိ..ပေါင်းလိုက်ရင် ၁၀၀ လောက်ပဲ ရှိမှာ။
ငါးမူးစေ့ကတော့ ၂ စေ့ကို ရေခဲချောင်း ၁ ချောင်းရသဖြင့် ၀ယ်စားပစ်လိုက်ပါပြီ..
Nov 4, 2008, 12:59:00 AM
ကဲ ပေါ်တော်မူ ကိုစေးထူးရေ
ပျောက်ချက်သားကောင်းလိုက်တာ။ ပေါ်မဲ့ ပေါ်လာတော့လဲ မေးခွန်းက မေးလိုက်သေး။
ဘယ်ရမလဲ မဖြေသေးဘူး။ :))
Nov 4, 2008, 1:05:00 AM
ခင်ဗျားရေးလိုက်တော့၊ အိမ်ကိုသတိရလိုက်တာ၊ မှန်တာပေါ့၊ ငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေ၊ မျက်ရည်တောင်လည်လာတယ်၊ ငယ်ငယ်က ရတဲ့မုန့် ဖိုး ၅ပြားတို့ ၁၀ပြားတို့ ဆိုတာကို မြန်မာပြည်က ခုခေတ်လူငယ်တွေ မသိကြတော့ဘူး၊လွမ်းစရာတွေဗျာ၊
ဘာပြောပြော ခင်ဗျားကိုတော့ လေးစားတယ်၊ ကျွှန်တော်တို့ မစဉ်းစားမိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့။
Nov 4, 2008, 1:28:00 AM
အ၀တ်တစ်ခါလျှော် ၁ ကျပ် ၂ ကျပ်ပဲထား။ ကျန်တဲ့အကြွေတွေက အသေးတွေပဲများမယ်။ တွက်ကြည့် တာ USD ၆၀ က ၈၀ ကြား လောက်ပဲရှိမယ်။ လွန်ရောကျွံရော အများဆုံး USD ၁၂၀ခန့်ပဲ။
Nov 4, 2008, 1:30:00 AM
ကျွန်တော်လဲ ၁ဒေါ်လာစေ့နဲ့ ဆင့်50စေ့ဆိုရင်မသုံးဘဲစုထားတာ..
Nov 4, 2008, 1:50:00 AM
may have 1 million dollars..
Nov 4, 2008, 2:43:00 AM
US$200 လောက်ရှိမယ်။ More or Less ပဲ။ ဝင်ဖြေလိုက်ပြီ။
မှန်ရင် အိမ်လိုက်ခဲ့ပြီး မုန့်ဝယ်ကျွေး ဒါမှမဟုတ် ဒီမှာ ဟိုတခါလို ဟင်းချက်ကျွေး...Okay!!
Nov 4, 2008, 6:28:00 AM
ဒီကို ပို.လိုက် အတိအကျ ပြောမယ်....
Nov 5, 2008, 7:16:00 AM
ကျွန်မကတော့ ၅တန်းမှ မုန့် ဖိုးစရတာ… စရတဲ့နှစ်ပဲ ကိုယ့်မုန့် ဖိုးစုငွေလေးနဲ့နာရီတလုံးဝယ်လိုက်တာ… ၃၀၀ကျပ်လေ… ငယ်တုန်းက လိမ္မာပေမယ့် ကြီးတော့မိုက်တာ… ကိုစေးထူးရဲ့ အကြွေဗူးကြီး အားကျတယ်… ၂၀၀လောက်တော့ ရှိမလားလို့ …
Nov 5, 2008, 7:43:00 AM
Nov 5, 2008, 8:36:00 AM
၁ ထောင်ကျော်မယ်ဗျ။ ၂ ထောင်တော့ မကျော်လောက်ဘူး။
ဟဲ ဟဲ ။ ကျွန်တော်လည်း အကြွေစေ့စုတာ ဝါသနာပါတယ်။ ကိုစေးထူးလိုပဲ ဗူးနဲ့ စုထားတာ။ ဗူးပုံစံတောင် ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ။ နောက်မှ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ကြွားရမယ်။ :D
Nov 6, 2008, 6:08:00 PM
You won't get anything because you will not go and change it, isn't it?
Nov 7, 2008, 6:21:00 AM
Nov 7, 2008, 6:33:00 AM
ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော့ ၃၀၀ နဲ့ ၅၀၀ ကြားရမယ်ထင်တယ်...။ ဒါနဲ့ ပြောရအုံးမယ် ကျွန်တော့်မှာလဲ Nescafe ဘူးနဲ့စုတထားတဲ့ အကြွေစေ့တွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်...။ အခုတော့ အဲ့ဒီ့ အကြွေစေ့တွေနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းကလူတွေကို မုန့် ၀ယ်ကြွေးလိုက်ပြီ :) ဟီး ဟီး
p.s- ခန့်မှန်းလို့ မှန်ရင် ဘာဝယ်တိုက် (အဲလေမှားလို့) ဘာဝယ်ကျွေးမှာလဲ? :P
Nov 8, 2008, 2:11:00 PM
အင်း အိမ်မှာတော့ ရေဗူးကြီးကြီးကို စုဗူးလုပ်ထားတယ်။ တဗူးပြည့်သွားတော့ နောက်တစ်ဗူးထပ်စုမယ်။